Qalalaasaha Itoobiya: "Fadhataysigu caadi buu ka noqday" magaalada Mekelle - Politicians in the News
Qalalaasaha Itoobiya: "Fadhataysigu caadi buu ka noqday" magaalada Mekelle
5 Disembar 2020
Ciidamada dawladdu waxay dagaal kula jireen xoogagga TPLF u daacadda ah tan iyo 4 Noofember
BBC-da ayay markii ugu horraysay u suurto gashay in ay la hadasho dad jooga magaalada Mekelle ee xarunta gobolka qalalaasuhu ka dhacay ee Tigray ee dalka Itoobiya, tan iyo markii Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed ku dhawaaqay dhamaadkan hawl galkii milatari ee afarta todobaad socday.
“runtii waa cabsi miidhan. Arintu way adagtahay. U malayn maayo in Tigray duruuftan adag oo kale weligeed soo martay” ayuu yidhi qof codkiisa quusi ka muuqato oo telefoonka hoos ugu hadlayaa.
BBC-du waxay maalmo dhan isku dayeysay in ay la hadasho dad jooga magaaladaas ay ku nool yihiin nus malyuunka qof. Telefoonada ayaa go’naa kooraankuna suququl buu ahaa taasaana adkaynaysay in xataa internet-ka dhanka dayax gacmeedka ah lagula xidhiidhi karo.
Laakiin waxa noo suurto gashay in aanu wada sheekaysi kooban la yeelano laba qof oo magaalada jooga Arbacadii iyo galabnimadii Khamiistii oo ka waramay aragtida ay ka qabaan waxa dhacaya.
Waxaanan aqbalnay in aanaan magac dhebin si aanay khatar u gelin.
Waxay waayeen adeegyadii aasaasiga ahaa tan iyo markii colaadu bilaaban tahay 4 Noofember.
Magaalo madaxda Tigray ee Mekelle waxa ku nool 500,000 oo qof
Labadaa qof ee magaalada degani waxay sheegeen in aan waxba is bedelin tan iyo markii ciidamada federaalka Itoobiya galeen Mekelle todobaad ka hor.
“Ilaa haatan koronto ma jirto, biyo ma jiraan adeegii bakiyaduna ma jiro” ayuu yidhi qof ka mid ah dadka aan la xidhiidhnay.
“Xafiisyo dawladeed oo magaalada ka shaqaynayaa ma jiraan”.
Wuxuu intaa ku daray in askarta ciidamada federaalka lagu arkayo meelo gaar ah oo aan booliskii iyo ciidamadii nabadgelyada ee gobolka la arkayn, fadhataysiguna wax caadi ah noqday.
Dhanka kale, warbaahinta u janjeedha dawladda ayaa ku warantay in “magaaladu caadigii ku soo noqotay”.
Qof uu waraystay telefishanka Itoobiya ee ETV ayaa yidhi “dadku magaalada way dhex lugaynayaan tukaamaduna way furan yihiin… oo xataa imika kaniisaddaan tagaynaa. Wax kastaa sidaa aad aragtoba waa caadi oo waa nabadgelyo”.
Xigashada Sawirka, ETV
ETV wuxuu baahiyey sawirro Mekelle laga soo qaaday oo uu sheegay in ay xaaladdu degan tahay
ETV wuxuu sidoo kale baahiyey sawirro ah dad lugaynaya wadooyinka magaalada.
Waxa sidoo kale jirta in lagu kala aragti duwan yahay khasaaraha gulufkii gaadhiisyey magaalada.
Todobaadkii hore intaan ciidamada federaalku galin Mekelle, waa la duqeeyey dadkii deganaana qaar baa ka qaxay oo u baxay duleedka magaalada si ay duqaynta uga badbaadaan.
Qalalaasaha Gobolka Tigrayga: Afar arrimood oo aad u baahan tahay in aad ka ogaato
‘Guryo la dumiyey’
‘Kaynta ayaan ku dhuumanaa’
Waxayaabaha gobolka Tigray caanka ku yahay
Isniintii ayaa Ra’isal Wasaare Abiy hor tagay golaha baarlamanka ee Addis Ababa waxaanu xildhibaannada u sheegay in “aan qof keliya oo shacab ah la dilin” intii hawl galku socday.
Hase yeeshee labada qof ee aanu la xidhiidhay ee Mekelle joogaa waxay BBC-da u sheegeen in ay duqayntii ka dib isbtitaalka magaalada ku arkeen dad rayid ah oo dhaawaca iyo kuwo mayd ah.
Qofkaan la xidhiidhnay wuxu sheegay in gurigan ku yaal Mekelle duqayntii lagu dumiyey qoyskii deganaa qaarkoodna lagu dilay
Dadkaa aanu la hadalnay midkood ayaa noo soo diray sawirka guri duqayntii lagu dumiyey oo ku yaal goob xaafado ah oo la yidhaa Ayder Edaga Begie oo ay ku dhinteen xubno ka mid ah qoysaskii deganaa midkood.
Isaga oo ka falcelinaya wararkaas ayaa wasiirka dimuqraadiyadeynta Itoobiya, Zadig Abraha, wuxuu sii adkeeyey aragtidii ra’isal wasaaraha oo wuxuu BBC-da ku yidhi “gebi ahaan ba waanu iska ilaalinay in dad rayid ah waxyeelo xagayaga ka gaadho”.
BBC-da waxa kale oo u suurto gashay in ay la hadasho qof jooga galbeedka Tigray, halkaas oo dagaal culusi ka dhacay horaantii bishii hore.
Isgaadhsiinta ayaa qayb ahaan loo soo celiyey aaggaas.
Dadka weli cabsi baa haysa, ayuu yidhi dadka aan la hadalnay midkood, waxaanu sheegay in maleeshiyo ka timid gobolka ay jaarka yihiin ee Amhara ay dadka laynayso, dhibayso oo ugu hanjabayaan in ay qoomiyada Tigray dhulka ka rarayaan.
“Waxaan isku dayey inaan Sudan u talaabo, way naga xidheen jidkii. Haatan dhibaato ayaa na haysata. Xabsi baad moodaa inaan ku jirno. Dadka qaarkood ma haystaan wax ay cunaan oo kaymaha ahay ku dhuumanayaan” ayuu yidhi.
“Maalintii kayntaan ku jirnaa. Ma jirto cid na ilaalinaysaa. Beerahayagii waanu ka qaxnay. Lo’dayadii waxay baadi ku tahay beeraha”.
Boqortooyadii Aksum ayaa waxaa xuddun u ahaa gobolkan. Waxaa lagu sifeeyey mid ka mid ah ilbaxyadii ugu waaweynaa ee horay u soo maray dunida. Waxay mar ahayd dowladdii ugu xoogga badneyd ee u dhexaysay boqortooyooyinkii Roomaanka iyo Beershiya.
Burburka magaalada Aksum haatan waa goob UN Heritage ay leedahay. Goobta, oo ka bilaabmaysa inta udhaxeysa Qarnigii 1aad iyo kii 13aad ee AD, waxaa ku yaal dhismayaal waaweyn, qalcado, qabriyo boqortooyo iyo kaniisad.
Inta badan dadka ku dhaqan gobolka Tigray waa masiixiyiin haysta madhabta Orthodox-ka ee Itoobiya.. Diinta masiixiga ayaa gobolka Tigray lagu beeray 1600 oo sannadood ka hor.
wpaadmin2020-12-05T12:01:15-06:00December 5th, 2020|Categories: Ethiopia|Tags: Abiy Ahmed|
China Germany India Nigeria Turkey Canada Russia Argentina Kenya Palestine France Uganda United States Tanzania Israel Brazil Armenia South Africa Ethiopia Egypt United Arab Emirates United Kingdom Mexico Ireland Iran
Abdalla Hamdok (166) Abdel Fattah Al-Sisi (249) Abdelmadjid Tebboune (289) Abiy Ahmed (458) Alberto Fernández (410) AMLO (346) Angela Merkel (3033) Armen Sarkissian (205) Bashar al-Assad (345) Benjamin Netanyahu (728) Bernie Sanders (842) Boris Johnson (3740) Carrie Lam (159) Covid-19 (10736) Cyril Ramaphosa (596) Daniel Ortega (163) Donald Trump (5287) Emmanuel Macron (3092) Evo Morales (415) Frank-Walter Steinmeier (192) Hassan Rouhani (2093) Jair Bolsonaro (1028) Jean Castex (356) Joe Biden (3842) John Magufuli (452) Justin Trudeau (2446) Khalifa bin Zayed Al Nahyan (265) Li Keqiang (354) Mahmoud Abbas (429) Micheál Martin (324) Mikhail Mishustin (418) Mostafa Madbouly (205) Muhammadu Buhari (1459) Narendra Modi (2830) Nicolás Maduro (196) Nicos Anastasiades (151) Nikol Pashinyan (372) Ram Nath Kovind (189) Recep Tayyip Erdoğan (541) Tamim bin Hamad Al Thani (146) Tsai Ing-wen (204) Uhuru Kenyatta (950) Vladimir Putin (2831) Xi Jinping (2780) Yoweri Museveni (747)
Africa (150) Algeria (318) Argentina (559) Armenia (422) Belize (116) Bolivia (386) Brazil (835) Canada (2588) Chile (125) China (2872) Cuba (131) Cyprus (125) DR Congo (161) Ecuador (129) Egypt (421) El Salvador (104) Ethiopia (425) France (2552) Germany (2838) Guatemala (115) Haiti (130) India (2608) Iran (2222) Iraq (141) Ireland (410) Israel (429) Kenya (941) Mexico (554) Nicaragua (142) Nigeria (1465) Palestine (429) Peru (125) Qatar (402) Russia (2417) Saudi Arabia (143) South Africa (561) Sudan (141) Syria (340) Tanzania (463) Turkey (446) Uganda (794) United Arab Emirates (476) United Kingdom (2942) United States (2305) Venezuela (124)